Sawirada MacBook Pro oo leh Notch ayaa ka muuqda shaashadda | Waxaan ka imid mac
Manuel Alonso | 17/10/2021 20:00 | Xanta
Haa, sawirka ugu weyn ee maqaalkani waa sawirka dunida u soo baxay. Ma hubo waxa Doraemon ku leeyahay, laakiin dhammaanteen waan jecel nahay isaga (ama ku dhawaad ​​dhammaanteen). Xaqiiqdu waxay tahay in qofka isticmaala Shabakadda bulshada ee Weibo oo leh magac adeegsade AnyTurtle999, ayaa leh waxay haysaa macluumaad lagu kalsoonaan karo oo ah MacBook Pro -ka soo socda Waxay la imaan doontaa Notch shaashadda. Habka ugu badan ee iPhone. Xusuus -qor oo lahaan doona shaqooyin kala duwan laakiin aan lahayn aqoonsi Face. Sidoo kale Reddit waxaa jira warar xan ah oo la mid ah. Marka uu webigu dhawaaqo…
Waxaan ka yarnahay 24 saacadood bilowga dhacdada cusub ee Apple taas oo la rabay in lagu soo bandhigo kombiyuutarada cusub ee Apple. Kuwaas oo muddo dheer la sugayay 14- iyo 16-inch MacBook Pros. Waa run in jiilka saddexaad ee AirPods sidoo kale la filayo in la soo bandhigo, laakiin waxa miisaankiisu yahay kombiyuutarrada. Hagaag hadda taxane cusub oo xanta ah ayaa soo ifbaxaya oo muujinaya in shaashadu soo bandhigi karto Notch. Su'aasha ugu horreysa ee igu soo dhacda, laakiin aan la xallin ayaa ah, ma arki doonnaa Qoraalkaas berri, Isniinta?
Haddii aan si dhow u eegno sawirka, aan isku dayno inaan illowno Doraemon, waxaan ka arki karnaa Notch -ka loo maleynayo xagga sare ee sawirka oo u muuqda inuu muujinayo kamarad FaceTime, makarafoon iyo dareere iftiin daarran oo loogu talagalay True Tone. Horraantii toddobaadkan, isticmaale Reddit ayaa sheegtay in MacBook Pro -ka soo socda ma lahaan doono Aqoonsiga Wajiga inkasta oo uu leeyahay Qoraalkaas. Su'aasha waxaa xalliya adeegsadaha Reddit laakiin ma aha adeegsadaha Weibo. Isla isticmaale kan shabakadda bulshada Mareykanka, wuxuu leeyahay waxaan yeelan doonnaa MacBook leh Aqoonsi Taabasho.
Ka taxaddar, maxaa yeelay nooca beta ee macOS Monterey, qaraarada shaashadda ee 3024 × 1964 iyo 3456 × 2234 ayaa loo arkaa xanta 14 iyo 16-inji MacBook Pro. Marka laga jaro 74 pixels dhererka labada, qaraarrada ka dhashay 3024 × 1890 iyo 3456 × 2160 waxay la shaqeeyaan saamiga 16:10. Dhammaan Apple MacBooks -ka hadda jira waxay leeyihiin saamiga 16:10, taasoo horseedaysa mala -awaal in 74 -ka dheeraadka ah ee loo yaqaan 'Pixels' ay u noqon karto Darajadaas
Berri waan arki doonaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Sawirka MacBook Pro oo leh Notch ayaa ka muuqda shaashadda
Apple MagSafe Double ma taageerayo ku dallacidda degdegga ah ee Apple Watch Series 7